Nsogbu gburugburu ebe obibi maka afọ a na ndị na-abịa! | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Tomas Bigordà | | Nchekwa ike, Ọmụmụ ihe ọmụmụ, Ike imeghari ohuru, Gburugburu, Teknụzụ ọhụrụ
Karịa mgbe ọ bụla ọzọ n'akụkọ ihe mere eme mmadụ, anyị nwere na aka anyị ga-eme n’ọdịnihu nke mbara ala dị ka anyị si mara ya na anyị na-eche ọtụtụ nsogbu ịma aka gburugburu ebe obibi.
Ọzọ anyị ga-ahụ ihe ịma aka ndị a bụ na-eweta nsogbu na ha nwere ike iweta.
1 Isi nsogbu gburugburu ebe obibi
2 Mbido onu ogugu
3 Azụ oke oke
4 Mbelata nke ịnweta
5 Ọdịnihu nke ụwa n'aka anyị
Isi nsogbu gburugburu ebe obibi
N'ime afọ iri gara aga, anyị na-ahụ ọtụtụ ihe ịma aka ndị ahụ yiri egwu ọdịnihu anyị dị ka ọha mmadụ:
Uto osooso nke onu ogugu.
El ike ọgwụgwụ nke ihe omuma.
Ihe nyocha nke Akụ akụrụ na iku ume nke oké osimiri.
Ba ụba na nje nke ala na mmiri.
Mbibi nke ọtụtụ umu.
Nkwuputa uka nke griin haus griin haus na-eme ka okpomoku zuru uwa dum.
Mbido onu ogugu
N’abalị iri atọ nke ọnwa iri n’afọ 30, ihe karịrị puku mmadụ asaa bi na mbara ụwa.
Na 2016 ha gafere 7400 ma ugbu a anyị eruola nde 7500 (7.504.796.488 kpọmkwem n'oge a na-ede akwụkwọ a dịka Worldomita).
Dabere na amụma ndị gọọmentị, na 2050 ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe gbanwere, ọ ga-ekwe omume na a ga-eru ijeri 10.000.
Ijeri mmadụ iri ga-achọ iri, ị drinkụ ihe ọ ,ụ ,ụ, ejiji, njem, ugbo, wdg.
Nke ahụ na-etinye nrụgide na usoro okike na akụrụngwa dịka ọ dịtụbeghị mbụ. Otu ihe atụ nke mmetụta nke ọnụ ọgụgụ a na-abawanye nwere na gburugburu anyị nwere ya n'ịkụ azụ.
Azụ oke oke
Dị ka nri ndị na-eri nri esiwanye epicurean na jikọtara ụwa, agụụ maka sushi na maka azụ na azụ n’ozuzu ha aghọọla nke ụwa.
Mba dị ka Spain nke azụ dị na ya dị mkpa nke nri anyị, emeela ka oriri a bawanye ma mee ka ọ dịkwuo mbara.
Ndozi nke ihe owuwu emeela ka o kwe omume rie azu ohuru n'ebe ọ bụla na mba. Mana omume a amụbaala n’elu ụwa niile, na-eme ka ụgbọ mmiri na-egbu azụ gaa ịkụ azụ gaa ebe ịkụ azụ na-arịwanye elu.
Nsogbu bụ na amụma a emetụtala ikike ịmụ ọmụmụ nke oké osimiri, nke mere na ya ọkwa kachasị nke nwudo ebe azu azu nile di.
Nke a bụ mmetụta na-apụta otu mgbe niile n'otu ụzọ ahụ; dị ka azụ ahụ na-abawanye n'otu mpaghara, mmepụta azụ na mpaghara ahụ na-abawanye ruo mgbe ọ ruru oke mgbe nke ahụ na - ejide ma ghara ịlaghachi iru kacha elu ọzọ.
Ọfọn, na 2003 ọ banyelarịrị ọnyide kachasị elu n'oké osimiri ụwa niile. Ọ bụ nke a mere ụgbo azụ ji amụba dịka a alternativa na-agbada n'ada n'agha.
Nke ahụ bụkwa nkọwa nke ihe anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị na ndị na-egbu azụ nke na-anaghị eri ruo afọ ole na ole gara aga.
Mbelata nke ịnweta
Planetwa anyị nwere akụkụ na a nke ukwu nke ikike na oke ego. The obibia nke ihe onwunwe, hà na-eleghara anya na ha ga-agwụ ike, na mgbakwunye na amaghi, na-ezighi ezi nye ọgbọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu.
Ozugbo amịpụtara ịnweta site na ala, agaghịzi ewepụta ya. N'ihi ya eji ọrụ na e mere ya dị ezigbo mkpa na naanị ezi uche ọnọdụ maka ọdịnihu bụ nguzobe nke usoro nke akụ na ụba ezigbo okirikiri n'ụzọ dị otú a na-anaghị eri ihe ndị a ma jiri ya.
Nke a na-egosi na ọ bụghị naanị na a na-emegharị ihe ọzọ, mana na mgbe a na-eme ya imewe na rụpụta Enweelarị ike iburu n'uche na mgbe ejirila ihe ndị a na-emezigharị ga-enwe ike iji ya rụọ ọrụ ọzọ.
Ọdịnihu nke ụwa n'aka anyị
Eziokwu bụ na n'agbanyeghị nsogbu ndị a niile yiri ka ha agaghị ekwe omume na yana nsogbu ndị a niile, taa anyị nwere karịa ngwaọrụ karịa mgbe ọ bụla iji merie nsogbu ndị a niile.
Ọmụma nke e nwere taa maka ihe na-eme anyị, ihe kpatara ya ji eme anyị na otu esi achọta ihe ngwọta ka ukwuu karịa mgbe ọ bụla.
Anyị nwere ngwaọrụ anyị iji bulie a ụdị mmepe ọzọ. Ikekwe maka nke a na maka ụdị okike Chineke, anyị bụ ndị ga-eche nnukwu nsogbu ịma aka mmadụ na-enwetụbeghị mbụ:
Mgbanwe Ihu Igwe kpatara zuru ụwa ọnụ kpatara mgbali anyị imepụta ikuku carbon dioxide n'ụzọ jọgburu onwe ya n'ime afọ 150 gara aga.
Ozi ọma ahụ bụ na anyị bụ ndị akpa emana n'inwe ikike anyị nwere iji kwụsị iyi egwu a wee dozie ụzọ anyị bi na mbara ala a wee zere nke na-ezere ọtụtụ oghom mmetụta.
Ihe ọjọọ bụ na anyị nwere ike ịbụ onye ikpeazụ na-enwe ike itinye ya n'ọrụ na mmesi ike ịga nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Nsogbu gburugburu ebe obibi maka 2017
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 na-echere ikpe ikpe maka ịbelata maka ume ọhụrụ na ICSID